Betsson: uphononongo lwekhasino ekwi-intanethi, ekhethekileyo owamkelayo ibhonasi kunye ne-spins
Dlala iRaspberry yekhasino
I-NetEnt, iMicrogaming, iLeander, iNeoGames, isiXeko saseNolimit, i-NYX, imidlalo ye-Inc, ukuVukelwa, iThunderkick, iRed Tiger Gaming, Quickpin, Play'n Go, iSoftBet
I-EcoPayz, i-Muchbetter, iBhanki yokuGqithisela, iTrasti, iVisa, iMasterCard, iMaestro
EcoPayz, Muchbetter, ukuGqithisela iBhanki, iTrasti, iVisa, iMasterCard
IBetsson yenye yeekhasino eyaziwa kakhulu kwi-intanethi. Ukongeza, uphawu luyaziwa ngokubheja. Iphumelele iintliziyo zabadlali kwihlabathi liphela iminyaka emininzi, ukubonelela ngeenkonzo zokungcakaza ezisemgangathweni ophezulu. Uhlobo lwentengiso eyaziwayo eyasekwa kwi-2001. Inkampani esekwe kwaye yaqala eMalta yafumana ilayisenisi yokuqhuba imisebenzi yokubhukisha kwi-2002 kwaye ukusukela oko ebeoyisa imakethi yokungcakaza ngokunikezela ngezisombululo ezitsha kunye neebhonasi zabadlali abavela kwihlabathi liphela.
IBetsson yenye yeekhasino ezindala ezikhoyo kwi-Intanethi ezisebenza ngoku emhlabeni.
Siza kujonga ubuchwephesha bobuchwephesha bekhasino, elinentloko yayo kule ndawo www.betsson31.com
IsiNgesi, kunye nesiPolish ukusuka kuluhlu lweLwimi lwe19. Ukukhetha iilwimi kulandela emva kokungena kwiphepha eliphambili. Umdlali unokukhetha ulwimi, emva koko iqonga labela umhlathana oguqulwe ngokupheleleyo kuwo. Udibaniso olukhulu lokufumaneka kwinguqulelo yolwimi lwasePoland.
Iindlela zokuhlawula zamkelwe
I-EcoPayz, ukuhanjiswa kweBhanki, ukuthembela, iVisa, i-MasterCard, iMaestro kunye nokudluliselwa kweebhanki zemveli. Uluhlu olubanzi lweendlela zokuhlawula lukuvumela ukuba ubeke kwaye ukhuphe imali efunyenwe kuyo nayiphi na iakhawunti yebhanki emhlabeni.
Imali eyamkelwe yikhasino
I-PLN, i-EUR, i-USD, i-GBP. UBetsson ulungiselelwe ukwanda kwabadlali basePoland, ababonelela ngenkxaso ye-PLN.
Abadlali basePoland akufuneki bakhathazeke ngenkxaso yamanye amazwe - eBetsson, zombini uncedo kunye nomnxeba ungaphelelwanga ngokupheleleyo. Umnxeba woncedo wasimahla usebenza iintsuku ezisixhenxe ngeveki, iiyure ezingama-7 ngosuku. Kwakhona kufanelekile ukukhankanywa licandelo loncedo olubanzi kunye ne-FAQ, apho abadlali be-novice banokufumana iimpendulo kwimibuzo ekhathazayo.
Ilungiselelwe abadlali ababhalise ibhonasi ye-akhawunti equka ukuphinda idipozithi. Wamkelekile ibhonasi 100% ukuya kwi-PLN 2000 kunye ne-200 free spins.
Gcina ujonge ii-imeyile apho uBetsson akumema khona ukuba uthathe ithuba lokujikeleza simahla kunye nendawo zokubeka kwimidlalo yabo. Ukongeza, kukho iibhonasi ezamkelekileyo ezilinde abadlali- i-PLN 2000 yobhaliso kunye ne-200 yasimahla yokujikeleza.
Ngelixa sisemidlalweni, i-Betsson yekhasino ibonelela ukubheja kwezemidlalo (ukubhukisha) kunye nokungcakaza ngendlela yesiqhelo kunye neendlela ezahlukileyo (zabalandeli bokuphucula). Hayibo, iRoulette, amakhadi akrelekrele, iindawo zokutyibilika, ibingo kunye neentlobo ezahlukeneyo zale midlalo. Abadlali abathanda ukuveliswa kwezinto ezintsha abayi kuphazamiseka.
I-Betsson liqonga lekhasino eliqinisekisiweyo-elicacileyo nelinezibonelelo ezininzi. Kufanelekile ukusebenzisa amava, iibhonasi kunye nokunikezelwa kwemidlalo yekhasino eyahlukeneyo. Ingakumbi ngoku ukuba uBetsson usungule iibhonasi zamkelekile zabadlali abatsha kunye nokujikeleza simahla.
»Qalisa ukudlala iBetsson